Hordhaca:Elman iyo Heegan-Wax waliba oo aad uga baahan tahay kulanka horyaalka Somali Premier League %
By Ramzi Yare	 Last updated Mar 4, 2020
Kooxaha Elman Sports Club iyo Heegan Sports Club ayaa galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow Stadium ee dhaca degmada Cabdicasiis ee Gobolka Banadir.
Garoonka Eng Yariisow ayaa galabta marti soori doona kulanka ugu xiisaha badan kaas oo dhaxmari doona kooxaha Heegan fc iyo Elman, waana kulankii ugu horeyay ee wajiga labaad ee horyaalka ka dheelayan labadan kooxod.
Kooxaha ayaa diyaar garow xoogan u galay tartanka Horyaalka iyago midba midka kale oo rabo inuu guul ku furto kulankiisa ugu horeya wareega labaad ee horyaalka.
Shantii kulan ugu dambeysay ay labadan kooxod isku arkan horyaalka Somali Premier League waxaa labo kamid ah badisay naadiga Elman sido kale Heegan ayaa labo kamid ah adkaatay halka kulanka kale ay ku kala baxeyn bar baro, taas oo la micno ah iney isku awood yihiin marka aan ka fiirino shantii dheel ee ugu dambeysay ay isk arkan labadan dhinac.
Kooxda Elman ayaa galabta isha ku heeysa iney hogaanka horyaalka dib ugu laabato iyado xasuusato bar barihii ay gashay kooxda la xifaaltameyso ee Dekedda Fc, Elman iminka waxey leedhahay 18-dhibcood halka Dekedda oo ah hogaamiyasha Horyaalka ay leedhahay 21-dhibcood balse Elman oo soo adkaatay waxey hogaanka ku qaban doonta farqi goolal.
Wiilasha Heegan ayaa ku dhiban iney ka adkaato kooxaha waa weyn sida Elman, Horseed, Dekedda iyo Mogdisho City Club, waxeyna galabta rabta iney meesha ka saarto taariikh xumada ka heesato in aysan ka adkaan kooxaha ugu tunka weyn.
Naadiga Elman kulankii ugu dambeyay ay horyaalka ka dheesho waxey bar baro 1-1 la soo gashay kooxda Midnimo halka Heegan ciyaartii ugu dambeysay guuldaro 1-0 kala soo kulantay kooxda Horseed.
Heegan ayaa hada ku jirta kala sareynta booska 5-aad iyado leh 14-dhibcood halka Elman ay fadhiso booska 2-aad ee kala sareynta horyaalka iyado leh 18-dhibcood.
Naadiga Elman ee Xilli ciyaareedkii la soo dhaafay waxey ku dhameysatay Kala sareynta kaalinta 3-aad halka Kooxda Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee Heegan iyadan ay baaqi ku noqotay booska 4-aad ee kala sareynta horyaalka
Hordhaca:Elman iyo Heegan
RASMI: Waxaa la Soo Saaray ISku aadka UEFA Nations league
RASMI:Isku Aadka 8 Dhamaadka FA Cup-ka Oo La Sameeyay &Kooxaha Waaweyn Isku Dheceen